"ရွှေမန်း၊ ဦး" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ - ဝီကီပီးဒီးယား
"ရွှေမန်း၊ ဦး" ၏ တည်းဖြတ်မှု မူကွဲများ
ရွှေမန်း၊ ဦး (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၀:၄၇၊ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ
၂၀၆၇၂ ဘိုက် ဖယ်ရှားခဲ့သည် , ပြီးခဲ့သည့် ၂ လ
၀၃:၀၇၊ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်)
၁၀:၄၇၊ ၁၀ ဇူလိုင် ၂၀၂၀ ရက်နေ့က မူ (ပြင်ဆင်ရန်) (နောက်ပြန် ပြန်ပြင်ရန်)
|rank = [[ဗိုလ်ချုပ်ကြီး]]
'''သူရရွှေမန်း''' (၁၁ ဇူလိုင် ၁၉၄၇ မွေးဖွား) သည် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတစ်ဦးဖြစ်ပြီး [[ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ]]အဖြစ် ၃၁ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၁ မှ ၂၉ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၆ အထိတာဝန်ထမ်းဆာင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက်က ညှိနိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး (ကြည်း၊ ရေ၊ လေ) အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူ တစ်ဦးလည်း ဖြစ်သည်။ ၁၉၄၇ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၁ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။မွေးဖွားသည်။ ဒေါ်ခင်လေးသက် <ref name="MMK">https://pyithu.hluttaw.mm/node/4999</ref> နှင့် အိမ်ထောင်ကျခဲ့ပြီးအိမ်ထောင်ကျပြီး သား(အောင်သက်မန်း<ref name="MMK"/><ref name="Myanma Daily">https://consult-myanmar.com/2016/10/11/military-officials-cronies-released-from-us-blacklist/</ref><ref>https://consult-myanmar.com/2016/10/11/military-officials-cronies-released-from-us-blacklist/</ref>၊ တိုးနိုင်မန်း<ref name="MMK"/>၊ ..... ) ထွန်းကားခဲ့သည်။ထွန်းကားသည်။
== ၂၀၁၀ မတိုင်ခင် ==
၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၀ ခုနှစ်အထိ တပ်မတော်တရပ်လုံးတွင် တပ်မတော် ကြည်း၊ ရေ၊ လေ ညှိနှိုင်း ကွပ်ကဲရေးမှူး ရာထူးဖြင့် အဆင့် (၃) ရာထူး ရှိသူဖြစ်ပြီး နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေး နှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ (နအဖ) အစိုးရအဖွဲ့ထဲတွင် အာဏာရှိသူ တစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် နဂိုရ် ကတည်းက ကြည်း၊ ရေ၊ လေတပ် အသီးသီးတွင် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်တစ်ဦးစီ ရှိပြီးဖြစ်သော်လည်း ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်းလက်ထက်မှ စတင်ပြီး တပ်မတော် ကြည်း၊ရေ၊လေ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူးဟူသည့် ရာထူး အသစ်ကို စတင် သုံးစွဲကိုင်တွယ်ရခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ရာထူးရရှိပြီးနောက်တွင် အထူးစစ်ဆင်ရေးမှူးများ နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်းမှူးတို့က သူ့ထံ တိုက်ရိုက် အစီရင်ခံကြရသည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ပထမဒီမိုကရေစီ အစိုးရအသစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းပြီးနောက် ၂၀၁၁ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလ ၃၁ ရက်နေ့တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
== စစ်အရာရှိဘဝ ==
၁၉၉၆ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်မှူးချုပ် ရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ပေးခံခဲ့ရကာ တပ်မ(၁၁) တပ်မမှူး တာဝန်ယူခဲ့ရသည်။ ထို့နောက် တစ်နှစ်တစ်နှစ်အကြာတွင် အကြတွင် ပုသိမ် အခြေစိုက်ပုသိမ်အခြေစိုက် [[အနောက်တောင်ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်|အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်]] တိုင်းမှူး အဖြစ်ရာထူးတိုးပြီး ပုသိမ်သို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ တပြိုင်တည်း နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ အဖွဲ့ဝင်လည်း ဖြစ်လာခဲ့သည်။
၂၀၀၀ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်ရာထူးသို့ တိုးမြှင့်ခံခဲ့ရပြီး နိုင်ငံတော် အေးချမ်းသာယာရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေ‌းဖွံ့ဖြိုးရေး ကောင်စီ အမြဲတမ်း အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အနောက်တောင်တိုင်း စစ်တိုင်းမှူး အဖြစ်မှ ရန်ကုန်မြို့ရှိ ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးရုံးသို့ ပြောင်းရွှေ့ခြင်းခံရသည်။
== ဒီမိုကရေစနစ် ကူးပြောင်းရေးကာလ ==
၂၀၁၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် နေပြည်တော် ဇေယျာသီရိမြို့နယ် မဲဆန္ဒနယ်မှ ပြည်သူ့လွှတ်တော်အတွက် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ ဝင်ရောက်ရွေးချယ်ခံခဲ့သည်။ <ref name="The Voice Myanmar">https://www.bbc.com/burmese/in-depth-41860443</ref> ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီး [[ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ]] အဖြစ်ပါ ရွေးချယ်တင်မြောက်ခြင်း ခံရသည်။ <ref name="The Voice Myanmar B">https://www.bbc.com/burmese/in-depth-41860443</ref> ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေအရ ရွေးကောက်ပွဲနှစ်ဝက် (၂၀၁၄) ခုနှစ်မှ (၂၀၁၆) နှစ်အထိ [[ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက]]အဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရရသည်။
ဒေါ်[[အောင်ဆန်းစုကြည်]] လွှတ်တော်ထဲ ရောက်လာပြီးနောက်ပိုင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် ဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်ကာ အပြုသဘောဆောင်ခဲ့သည်။ ‌‌လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်အတွင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အုပ်စုနှင့် တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်တို့ ပူးပေါင်း‌ဆောင်ရွက်သည်ဟု သုံးသပ်ရသော ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ(၁၂) ရက် သန်းခေါင်ယံ အာဏာသိမ်းပွဲဖြင့် ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ တွဲဖက်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်မှ အများသဘောဆန္ဒ မပါဘဲ ထုတ်ပယ်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။
== ၂၀၁၆ - ယနေ့အချိန်ထိ ==
[[အထွေထွေ ရွေးကောက်ပွဲ၊ ၂၀၁၅|၂၀၁၅ အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ]]တွင် [[ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ]]ကို ကိုယ်စားပြု၍ [[ပြည့်သူ့လွှတ်တော်]]အတွက် [[ဖြူးမြို့နယ်]]တွင် ယှဉ်ပြိုင်သော်လည်း ပြိုင်ဘက် [[အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်]]မှ ဦးသန့်ညွန့် ကို ၂၀% ဆန္ဒမဲ ကွာခြားချက်ဖြင့် ရှုံးနိမ့်ခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်မရသော်လည်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဦးဆောင်သည့် ဒုတိယအကြိမ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်တွင်' ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ်ခန့်အပ်ခြင်း ခံခဲ့ရသည်။ <ref>[http://www.bbc.com/burmese/burma/2016/02/160205_ushwemann ပြည်သူ့လွှတ်တော်အသစ်မှာ တာဝန်သစ်နဲ့ သူရဦးရွှေမန်း - BBC News မြန်မာ<!-- Bot generated title -->]</ref>
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် သူဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့ဝင် (၁၉) ဦးက [[ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ]] (Union Betterment Party (UBP)) ကို တည်ထောင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ‌ကော်မရှင်က တရားဝင် အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စတင်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့နယ်ပေါင်း (၃၃၀) အနက် မြို့နယ် (၂၂၀) တွင် ပါတီ ရုံးခွဲများကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကာ ပါတီဝင် အရေအတွက် (၅) သိန်းကျော်အထိစုဆောင်းရရှိလာနိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ပါတီက လာမည့် (၂၀၂၀) ‌‌ရွေးကောက်ပွဲတွင် တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှု ‌ဆောင်ရွက်မည်မဟုတ် ဟူ၍ သဘောထားကြေငြာခဲ့သည်။
== ဘဝဖြတ်သန်းမှု ==
၂၀၁၁ ဧပြီလ ၁၀ - ဖြူးမြို့နယ် ခုတင်(၅၀) ဆံ့ ပြည်သူ့ဆေးရုံအဆောက်အအုံသစ် ဖွင့်ပွဲ၊ အထက (၁) ကျောင်းဝင်းအတွင်း၌ နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင် သစ်ဖွင့်ပွဲနှင့် ကျောက်တံခါးမြို့နယ် တောကျွဲအင်း (၁၆) ခုတင်ဆံ့ တိုက်နယ် ပြည်သူ့ဆေးရုံသစ် ဖွင့်ပွဲများကျင်းပရာ အခမ်းအနားသို့ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့်ဇနီး ဒေါ်ခင်လေးသက် တို့ တက်ရောက်အားပေး ချီးမြှင့်သည်။
၂၀၁၁ ‌အောက်တိုဘာ ၇ - ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်ကြီး မစ္စတာ လီကျွင်းဟွာကို နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ၌ တွေ့ဆုံသည်။
၂၀၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ - ဒုတိအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များကို ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်တွင် ဥက္ကဌအဖြစ် တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရသည်။<ref>[https://www.pyithuhluttaw.gov.mm/duttiyakim-11]</ref>
၂၀၁၂ မေ ၃ - ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် နိုင်ငံတကာ အလုပ်သမားအဖွဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ ဥက္ကဋ္ဌ Mr. Greg Vimes ခေါင်းဆောင်သော အဖွဲ့ကို နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးသည်။
၂၀၁၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၂၈ - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ကို ရုပ်သိမ်းလိုက်သည်။<ref>[https://www.pyithuhluttaw.gov.mm/duttiyakim-11]</ref>
၂၀၁၂ မေ ၆ - ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် ဂျာမနီနိုင်ငံ ဟန်ဆိုင်ဒယ် ဖောင်ဒေးရှင်း ၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ဂျာမနီနိုင်ငံနှင့် ဘယ်လ်ဂျီယံနိုင်ငံ လွှတ်တော်များသို့ လေ့လာရန်နှင့် ချစ်ကြည်ရေးခရီးသွားရောက် ရန် ရန်ကုန်မြို့မှ လေကြောင်းခရီးဖြင့် ထွက်ခွာသည်။
၂၀၁၂ မေ၂၃ - ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းခေါင်းဆောင်သော မြန်မာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ဂျာမနီ၊ ဘယ်လ်ဂျီယံ၊ နော်ဝေး၊ အင်္ဂလန်ပြည်နှင့် ဒိန်းမတ်နိုင်ငံများသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး သွားရောက်ပြီး ပြန်လည်ရောက်ရှိသည်။
၂၀၁၂ မေ ၃၀ - ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ဂျာမနီနိုင်ငံ ဂျာမန်လွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ အော်ဂါစွမ်လ် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော် အဆောက်အအုံ၌ တွေ့ဆုံသည်။
၂၀၁၂ အောက်တိုဘာ ၁၄ - ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏ ပထမအကြိမ် ဗဟိုကော်မတီ အစည်းအဝေးတွင် ဦးသိန်းစိန်သည် ဥက္ကဋ္ဌ၊ သူရဦးရွှေမန်းသည် ဒုဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူခဲ့သည့် ၄၄ဦးပါ ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီကို ရွေးချယ်သည်။
၂၀၁၃ ဧပြီ ၂ - ပြည်သူ့လွတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် စင်ကာပူ သမ္မတနိုင်ငံသမ္မတ ဒေါက်တာတိုရီတန်ကင်ယမ် ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ ကိုနေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ဇမ္ဗူသီရိ ဧည့်ခန်းဆောင်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
၂၀၁၃ ဧပြီ ၄ - ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် နော်ဝေးနိုင်ငံ ကုန်သွယ်ရေးနှင့် စက်မှုဝန်ကြီး H.E. Mr. Trond Giske ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို နေပြည်တော်၌ တွေ့ဆုံသည်။
၂၀၁၃ ဧပြီ ၂၇ - ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ဩစတြေးလျ ဥပဒေပြု အထက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဆီနိတ်တာ Hon. John Joseph Hogg ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို လွှတ်တော်ရုံးခွဲ (ရန်ကုန်)၌ တွေ့ဆုံသည်။
၂၀၁၃ ဇွန် ၁ - ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ရန်ကုန်မြို့ သံလွင်လမ်းရှိ လွှတ်တော်ရုံးခွဲ၌ ကျင်းပသည့် မြန်မာနိုင်ငံ အင်ဂျင်နီယာကောင်စီ ဥပဒေကြမ်းနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲသို့ တက်ရောက် အမှာစကားပြောကြားသည်။
၂၀၁၃ ဇွန် ၃ - ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့အစည်း ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စက်မဒလင်းအောလ်ဘရိုက် ဦးဆောင်သည့် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးခန်းမ၌ တွေ့ဆုံသည်။
၂၀၁၃ ဇွန် ၈ - အမေရိကန် ကွန်ဂရက်ဥက္ကဋ္ဌ H.E. John A. Boehner နှင့် အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု အစိုးရတို့၏ ဖိတ်ကြားချက်အရ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်း ခေါင်းဆောင်သော လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး သွားရောက်သည်။
၂၀၁၃ ဇွန် ၂၀ - ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် တိုင်းပါလီမန်ဥက္ကဋ္ဌနှင့် အောက်လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ H.E Mr. Somsak Kiatsuranonk ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကို ရန်ကုန်မြို့သံလွင်လမ်းရှိ လွှတ်တော်ရုံးခွဲ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
၂၀၁၃ ဇူလိုင် ၁၆ - ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းသည် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများ ၊ အတွင်းရေးမှူးများ၊ ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ဇမ္မူသီရိ ခန်းမဆောင်အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
၂၀၁၃ ဇူလိုင် ၂၁ - ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌများအား ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင် ရေး လုပ်ငန်းကော်မတီ ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌနှင့် ကော်မတီဝင်များက ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်းကို ရန်ကုန်မြို့ မြန်မာနိုင်ငံ ငြိမ်းချမ်းရေး ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်း ဗဟိုဌာန၌ ကျင်းပ သည်။
၂၀၁၃ စက်တင်ဘာ ၂ - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းသည် ရှမ်းပြည်နယ် တောင်ကြီးမြို့ မြို့တော်ခန်းမတွင် ဒေသခံပြည်သူများနှင့်တွေ့ဆုံ ပြီး လွှတ်တော်ဖက်ဒရယ်နှင့် ငြိမ်းချမ်းရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးကာ ပြည်သူများမေးမြန်းချက်ကို ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
၂၀၁၃ စက်တင်ဘာ ၃ - သူရဦးရွှေမန်းသည် "ဝ" သွေးစည်းညီညွတ်ရေးပါတီ (UWSP) မှ ဒုတိယစစ်ရေးချုပ် ဦးခွန်ဂန်၊ ပြည်ပဆက်ဆံရေးဌာနမှ ဦးကျောက်ကော့အန်း၊ "ဝ" တောင်ပိုင်းဗျူရိုမှ ဦးအိုက်လိပ်နှင့် (UWSP) ၏ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးအောင်မြင့်တို့နှင့် တွေ့ဆုံ၍ "ဝ" ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ တိုင်းဒေသအတွင်း သန်းခေါင်စာရင်း ကောက်ယူရေး အပါအဝင် အောက်ခြေတပ်များအကြား ပြဿနာ ဖြစ်ပွားပါက မြန်ဆန်စွာ ညှိနှိုင်းဖြေရှင်းရေး၊ ဥပဒေ‌ဘောင်အတွင်း အစိုးရနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး ကိစ္စရပ်များကို ဆွေးနွေးသည်။
၂၀၁၃ စက်တင်ဘာ ၄ - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက ပြည်သူ့‌လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရွှေမန်းသည် ရှမ်းပြည်နယ် ကျိုင်းတုံမြို့ မြို့တော်ခန်းမ၌ ပြုလုပ်သည့် ဒေသခံ ပြည်သူလူထုနှင့် တွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက် အမှာစကား ပြောကြားသည်။ ထို့နောက် အထူးဒေသ (၂) မှ UWSA "ဝ" အဖွဲ့မှ ဦးအိုက်ဂျွန်း ဦးစီးသောငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့နှင့် လည်း ကောင်း၊ ညနေပိုင်းတွင် အထူး‌ဒေသ(၄) မှ ဦးစိုင်းလင်း ဦးစီးသော ငြိမ်းချမ်းရေးအဖွဲ့အား လည်းကောင်း ကျိုင်းတုံမြို့ ရွှေတြိဂံရိပ်သာ၌ တွေ့ဆုံသည်။
၂၀၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၃ - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းနှင့် အဖွဲ့သည် ဆီးဂိမ်းပြိုင်ပွဲ ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့် အားကစားအဖွဲ့များ လေ့ကျင့် နေမှုကို ကြည့်ရှုအားပေးသည်။
၂၀၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၇ - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယကနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့်အဖွဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံ House of Representative ဥက္ကဋ္ဌ၊ Hon.Mr. Bunmei Ibuki ၏ဖိတ်ကြားချက်အတွက် ရန်ကုန်မြို့မှ လေကြောင်းဖြင့်ထွက်ခွာသည်။
၂၀၁၃ နိုဝင်ဘာ ၂၉ - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းသည် အစိုးရ အိမ်တော် အထူးဧည့်သည်တော်များ ခန်းမဆောင်သို့ သွားရောက် ကာ ဂျပန်နိုင်ငံဝန်ကြီးချုပ် မစ္စတာရှင်ဇိုအာဘေးနှင့် တွေ့ဆုံသည်။
၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၁၆ - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းနှင့် အဖွဲ့သည် အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေးခရီး သွား ရောက်ရန် ရန်ကုန်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လေဆိပ်မှ ထွက်ခွာသည်။
၂၀၁၃ ဒီဇင်ဘာ ၂၁ - ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိနေသော သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ချစ်ကြည်ရေးကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့သည် ကမ္ဘောဒီးယားဘုရင် နန်းတော်သို့ ရောက်ရှိပြီး ကမ္ဘောဒီးယားဘုရင်နှင့် တွေ့ဆုံသည်။
၂၀၁၄ ဇန်နဝါရီ ၆ - သူရဦးရွှေမန်းသည် ဂျပန်နိုင်ငံ လွှတ်တော်ဥပဒေရေးရာနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အမြဲတမ်းကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ မစ္စတာ အီချီရိုအာရိုဆဝါနှင့် လစ်ဘရယ် ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ (LDP)၊ ဒီမို ကရက်တစ်ပါတီနှင့် ဂျပန် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ပါတီတို့မှ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံသည်။
၂၀၁၄ မတ် ၂၆ - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် တိုင်းဥပ‌ဒေစိုးမိုးရေးနှင့် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး ကော်မတီဥက္ကဋ္ဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့သည် နေပြည်တော်ရှိ လွှတ်တော်အဆောက်အအုံ ဇမ္မူသီရိဧည့်ခန်းမဆောင်၌ သတင်းမီဒီ ယာများနှင့် တွေ့ဆုံ၍ မေးခွန်းများဖြေကြသည်။
၂၀၁၄ ဧပြီ ၈ - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ချစ်ကြည်ရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့သည် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ ပေကျင်းမြို့ သို့ ရောက်ရှိသည်။
၂၀၁၄ ဧပြီ ၁၁ - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းနှင့် အဖွဲ့သည် ပေကျင်းမြို့၌ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ ရှီကျင့်ဖျင်နှင့် တွေ့ဆုံသည်။
၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၃၁ - ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် နာယက သူရဦးရွှေမန်းသည် ရန်ကုန် တိုင်း ဒေသကြီး မှော်ဘီမြို့နယ် အားကစားကွင်း၌ ကျင်းပသည့် တောင်သူလယ်သမားရေးရာ လူထုတွေ့ဆုံပွဲသို့ တက်ရောက်အမှာ စကားပြောကြားသည်။
၂၀၁၅ ဩဂုတ် ၁၂ - နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ရှိ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ရုံးချုပ်တွင် ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ သူရဦးရွှေမန်းနှင့် ဗဟိုအလုပ် အမှုဆောင် ၁၂ဦးကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်အမိန့်ဖြင့် ဖြုတ်ချလိုက် သည်။
၂၀၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ - ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌ တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သော သူရဦးရွှေမန်း က ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခံရသူ ဦးဝင်းမြင့်ထံ ပြည်သူ့လွှတ်တော်ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်းများ လွှဲ ပြောင်းပေးအပ်သည်။
၂၀၁၆ ဖေဖော်ဝါရီ ၄ - သူရဦးရွှေမန်း ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ပါဝင်သော ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စ ရပ်များကိုသာ ဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေးကော်မရှင်ကို ပြည်သူ့လွှတ်တ်ေ အမိန့်ကြေညာစာ အမှတ် ၉၊ ၂၀၁၆ ဖြင့်ပြန်လည်ဖွဲ့စည်းသည်။
၂၀၁၇ နိုဝင်ဘာ ၂၀ - ပြည်သူ့လွှတ်တော်က သူရဦးရွှေမန်း ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် တာဝန်ယူထား သော ဥပဒေရေးရာ အထူးကိစ္စရပ်များလေ့လာ ဆန်းစစ်သုံးသပ် ရေး ကော်မရှင် (အထူးကော်မရှင်)ကို တာဝန်နှင့် လုပ်ပိုင်ခွင့်များ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ပေးသည်။
၂၀၁၈ - ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာ အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာ ဆန်းစစ် သုံးသပ်ရေးကော်မရှင် ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိ သည်။ သူ၏ကော်မရှင်၌ ယခုအခါ အဖွဲ့ဝင်(၃၈)ဦးအထိ တိုးချဲ့ဖွဲ့ စည်းထားသည်။
== စီးပွားရေး အင်ပါယာ ==
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း၏ သားဖြစ်သူ [[အောင်သက်မန်း]]<ref name="SearchMyanmar">https://www.bbc.com/burmese/burma/2014/04/140430_land_confiscation_shweman</ref> <ref name="Myanmar Latest News">https://www.bbc.com/burmese/burma/2016/06/160626_farms_retribution_ayawaddy</ref><ref name="သူရိယ B">https://burma.irrawaddy.com/article/2016/04/08/112067.html</ref> သည် ဧရာရွှေဝါ ကုမ္ပဏီကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်ကတည်းက စတင်တည်ထောင်ပြီး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်နေခဲ့သည်။ အဆိုပါကုမ္ပဏီသည် ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် စင်္ကာပူနိုင်ငံသို့ ဆန်တင်ပို့ခွင့် ပထမဆုံးရရှိသော ကုမ္ပဏီများထဲမှ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ဦးတေဇပိုင် ထူးကုမ္ပဏီနှင့် ၂၀၁၀ခုနှစ်အထိသာ၂၀၁၀ခုနှစ်အထိ နီးနီးစပ်စပ် တွဲဖက်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီ တစ်ခုလည်းဖြစ်သည်။
၂၀၀၇ ခုနှစ် အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ထုတ်ပြန်သည့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် နှင့် သူတို့၏ မိသားစုများအား ဗီဇာပိတ်ပင်ခြင်း စာရင်းထဲတွင် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သူရရွှေမန်း၏ ဇနီး ဒေါ်ခင်လေးသက် ကိုလည်းထည့်သွင်း ခဲ့သည်။ကိုလည်းထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ် ကုန်နှင့်ခုနှစ်ကုန်နှင့် ၂၀၀၉ ခုနှစ်အစပိုင်းတွင် သားဖြစ်သူ တိုးနိုင်မန်းပိုင်သည့် Red Link ကုမ္ပဏီမှ မြန်မာ့ ဆက်သွယ်ရေး လုပ်ငန်း ဝန်ကြီးဌာနနှင့်လုပ်ငန်းဝန်ကြီးဌာနနှင့် မြန်မာတယ်လီပို့မှ ဝန်ဆောင်မှုပေးသည့် Broadband အင်တာနက် ကိုလက်လီအင်တာနက်ကိုလက်လီ ပြန်လည်ရောင်းချသည့် လုပ်ပိုင်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။ ဝိုင်မက်စ် အင်တာနက် ဝန်ဆောင်မှု အမည်ဖြင့် လူသိများခဲ့သည်။
၂၀၁၀ ခုနှစ် စက်သုံးဆီ တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးခြင်း နှင့်တင်သွင်းဖြန့်ဖြူးခြင်းနှင့် အစိုးရပိုင် စက်သုံးဆီဆိုင်များအား ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပြုလုပ်သည့် အစီအစဉ်တွင် တိုးနိုင်မန်းလည်း ပါဝင်လုပ်ကိုင်လျက်ရှိပြီး စက်သုံးဆီဆိုင်များ ဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံ စက်သုံးဆီတင်သွင်းသူများ အသင်းတွင်လည်း ၂၀၁၁ ခုနှစ်အထိ (ယာယီ) တာဝန်ယူထားသူ တစ်ဦးဖြစ်သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် တွင် ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေရေးရာနှင့် အထူးကိစ္စရပ်များ လေ့လာဆန်းစစ်သုံးသပ်ရေး ကော်မရှင်ကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ဖျက်သိမ်းခဲ့ပြီးနောက်
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဧပြီလ (၂၅) ရက်နေ့တွင် သူဦးဆောင်သည့် အဖွဲ့ဝင် (၁၉) ဦးက [[ပြည်ထောင်စုကောင်းကျိုးဆောင်ပါတီ]] (Union Betterment Party (UBP)) ကို တည်ထောင်ရာ မြန်မာနိုင်ငံ ပြည်ထောင်စုရွေးကောက်ပွဲ ‌ကော်မရှင်က တရားဝင် အတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှ စတင်ပြီး ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလအထိ မြန်မာနိုင်ငံ၏ မြို့နယ်ပေါင်း (၃၃၀) အနက် မြို့နယ် (၂၂၀) တွင် အဆိုပါ ပါတီ ရုံးခွဲများကို ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကာ ပါတီဝင် အရေအတွက် (၅) သိန်းကျော်အထိစုဆောင်းရရှိလာပြီး မြန်မာနိုင်ငံ၏ တတိယ အင်အားအကြီးဆုံး ပါတီ ဖြစ်လာသည်။ ၎င်း၏ ပါတီက လာမည့် (၂၀၂၀) ‌‌ရွေးကောက်ပွဲတွင် တိုင်းရင်းသားဒေသများတွင် တိုင်းရင်းသားပါတီများနှင့် ယှဉ်ပြိုင်မှု ‌ဆောင်ရွက်မည် မဟုတ် ဟူ၍ သဘောထားကြေငြာခဲ့သည်။
"https://my.wikipedia.org/wiki/အထူး:MobileDiff/523208" မှ ရယူရန်